ခုနှစ်ရက်အတွင်း ဆယ်ပေါင် နှင့်အထက် အဆီချ Diet Program.. | hkmeljp
ခုနှစ်ရက်အတွင်း ဆယ်ပေါင် နှင့်အထက် အဆီချ Diet Program..	April 10, 2013hkmeljp	Health	Leaveacomment
ကဲ ဒီအဆီချနည်းကို စောင့်နေကြတဲ့လူတွေ အတော်များမယ်ထင်ပါတယ်…. ဒီစာတွေအားလုံးကို ကျွန်တော့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော့ အတွက် အပင်ပန်းခံရိုက်ပေးထားရှာတာပါ…… အခု သူ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပဲ သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှပါတယ်….🙂 ဒီ Program ကိုလည်း သူပဲရှာပေးခဲ့တာကိုး……
အရသာရှိစေရန် ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ မဆလာ၊ အမွှေးအကြိုင် လိုအပ်သလိုထည့်ပါ။ (တုန်ယမ်း ချဉ်စပ် အနှစ်နဲ့ တွဲဖက်ချက်လျှင်လည်းရပါသည်… ကျွန်တော်ကတော့ တုန်ယမ်းနှင့်တွဲချက်ပါသည်…. အနံအသက်အတော်သက်သာသည်ကို တွေ့ရပါသည်..)
« သဲကန္တာရမှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆိုလာပြားသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် စက်ရုံ	သေရွာပြန် ကိုအောင်ဆန်း နှင့် ရေဖျဉ်းရောဂါအတွက် ဆေးတစ်လက် »